I-China iStelloy Alloy / iStellite6 / i-6B yesitayile abavelisi kunye nabathengisi | Sekonic
Ingxubevange yeStelayithi / iStellite6 / iStellite 6B
Amagama aqhelekileyo oRhwebo: I-Cobalt Alloy 6b, iStelite Alloy, iStellite 6, iStellite 6B, i-UNS R30006,
IStelloy Alloy 6B sisixhobo esisekwe kwi-cobalt esetyenziselwa imeko ye-abrasion, anti-seize, anti-wear and anti-friction. Umlingani wobundlobongela we-alloy 6B usezantsi kakhulu, kwaye unokuvelisa ukudibana ngokutyibilika nezinye izinyithi, kwaye kwiimeko ezininzi ayizukuvelisa ukunxiba. Nokuba akukho sithambiso sisetyenzisiweyo, okanye kwizicelo apho igrisi ingasetyenziswanga, i-6B alloy inokunciphisa ukubanjwa kunye nokunxiba. Ukuxhathisa ukunxiba kwe-alloy 6B kuyinto yendalo kwaye ayixhomekeki emsebenzini obandayo okanye kunyango lobushushu, ngenxa yoko inokunciphisa umthwalo wokunyanga ubushushu kunye neendleko zokwenza okulandelayo. I-alloy 6B iyamelana ne-cavitation, ifuthe, ukothuka okune-thermal kunye ne-Corrosive medium. Kwimeko yobushushu obomvu, i-alloy 6B inokugcina ubunzima obukhulu (ubunzima bokuqala bunokubuyiselwa emva kokupholisa). Kwimeko yokunxiba kunye nokubola, i-alloy 6B iyasebenza kakhulu.
Isitayile se6 / 6B yeCompiscal Compostions
Ni Ukuya kwi-3.0%
Fe Ukuya kwi-3.0%
Mnu Ukuya kwi-1.0%
Mo Ukufika kwi-1.5%
Iimveliso zeStrellite 6B ezifumaneka kwiiSekonic Metals
Isitayile se-6 / 6B seWelding Wire
Ukubonelela ngetelesi ye-6 / 6B yocingo lokufaka iwelding kwifom yekhoyili kunye nobude bokusika
Isitayile se6B neeBhari kunye neentonga
UKWAKHA ujikeleze ibha kunye nokuphosa ibha ejikelezayo zombini kunokuveliswa ngathi ngokwe-AMS5894 nganye
Isitayile se-6 / 6B Ring kunye neMikhono
Ring Valve isihlalo, eyahlulayo sleeve unako ukuvelisa njengoko abathengi iinkcukacha
Ukuqhubekeka kwe-6 / 6B:
Ngokwesiqhelo sebenzisa izixhobo ze-carbide zesamente ukwenza inkqubo ye-6B, kwaye ukuchaneka komphezulu kungama-200-300RMS. Isixhobo se-alloy kufuneka sisebenzise i-5 ° (0.9rad.) I-angle engeyiyo kunye ne-30 ° (0.52Rad) okanye i-45 ° (0.79rad) i-angle ekhokelayo. I-alloy ye-6B ayifanelekanga ukubetha ngokukhawuleza kunye nokusetyenziswa kwe-EDM kusetyenziswa. Ukwenzela ukuphucula ukugqitywa komphezulu, ukugaya kunokusetyenziselwa ukufezekisa ukuchaneka okuphezulu. Ayikwazi ukucinywa emva kokugaya okomileyo, kungenjalo iya kuchaphazela imbonakalo
Indawo ye-6 / 6B yesicelo:
I-alloy 6B inokusetyenziselwa ukwenza iinxalenye zevalve, iipompu zokufaka, i-injini ye-anti-corrosion cover, iibheringi ezinobushushu obuphezulu, iziqu zevalve, izixhobo zokulungisa ukutya, iivelufa zenaliti, umngundo oshushu we-extrusion, ukwenza ii-abrasives, njl.
Egqithileyo I-3J01 Bar / Strip / Sheet
Okulandelayo: Isitayile 6 / Isitayile 6B / Isitayile 12 / Isitayile seWelding yeWelding yeWeldig Rod
IHaynes 25 (ingxubevange L605-Co350) iWelding Wire
I-Refractaloy 26 (R26) Ibha / iBolt / Iringi / Amandongomane
I-alloy Refractaloy 26 / R26 Turbine Bolt esetyenziswe kwi ...
Ucingo lweWelding, IHaynes 25 Intambo, Isitayile 6, Yenza ingxubevange R26 evulwa, iringi yesitayile, Isitayile 6B,